October 2018 – Esancharpati
7 months ago Wednesday, October 31, 2018
बटोर, मङ्गोलिया । आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि मङ्गोलियाका एक जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। मङ्गोलियाको खाद्य, कृषि र उद्योगमन्त्री बाट्जार्गाल बाट्जोरिङले बुधबार राजीनामा दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। “मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको छु, यसमा मलाई कुनै समस्या छैन,” उनले पत्रकारहरुलाई भने। सत्तारुढ दल मङ्गोलियन पिपुल्स पार्टी ग्रुपले नै संसदमा उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको […]
सन्दीपको टिमलाई पहिलो सफलता
पोखरा । पोखरामा जारी सर्वाधिक पुरस्कार राशीको नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको विराटनगर टाईटन्सले पहिलो जित निकालेको छ । बुधबार भएको रोमान्चक खेलमा विराटनगरले सोमपाल कामीको बुटवल ब्लास्टर्सलाई १२ रनले हराएको हो । लगातार तीन खेलको हारपछि विराटनगरको यो पहिलो जित हो । जितसंगै विराटनगर ४ खेलबाट २ अंक […]
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले यही कात्तिक २३ गते बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा भाइटीकाको साइत उत्तम हुने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिए। समितिले शुभ बेलाको साइत दिएको जनाइएको छ। यस वर्ष यमपञ्चक अर्थात् तिहार कात्तिक १९ […]
7 months ago Monday, October 29, 2018
बारा । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेस नेतृत्वबाट नै शक्ति दुरुपयोग भएको बताएका छन्। काङ्ग्रेस निजगढ नगर समितिले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले अब पार्टीको विधानमा नै काङ्ग्रेस सभापतिको अधिकार कटौतीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेता डा कोइरालाले शक्तिकै दम्भले गर्दा काङ्ग्रेसमा गुट–उपगुट जन्मिँदा कार्यकर्ता दिक्क भएकाले यसको अन्त्य […]